Solitaire 🥇 Ngena kwaye wonwabe kwi-Emulator
Ngamalolo Yiyo umdlalo wekhadi lomntu omnye. Kuba umdlalo udlalwa wedwa, eyona njongo iphambili ayikokubetha umdlali welinye iqela, kodwa kukusombulula umdlalo, ukuqeqesha ukucinga kwakho okunengqiqo, kwaye ngamanye amaxesha kukwasetyenziselwa nokucamngca.
ISolitaire: Idlalwa njani inyathelo ngenyathelo? 🙂
Ukwenza i Ngamalolo online simahla, kufuneka nje landela le miyalelo inyathelo ngenyathelo:
2 nyathelo. Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kufuneka kuphela ukudlala umdlalo kwaye ungaqala ukukhetha i-solitaire oyithandayo. Unokukhetha ubunzima obulifanela kakhulu inqanaba lakho lokudlala.
Emva kokuyikhethaUnokukhetha nenani lamaqhekeza ayakuba nayo iphazili.
Inyathelo le-4. Ukuphelisa onke amakhadi kumdlalo ukuze uphumelele. Kule nto kufuneka ubeke la makhadi kwiindawo ezininzi zamakhadi eUmbala ofanayo kunye nocwangco.
Inyathelo le-5. Emva kokugqiba umdlalo, cofa "Phinda Uqalele" Ukwenza enye solitaire
Yintoni iSolitaire? 😀
Ngamalolo (ekwabizwa ngokuba yi-solitaire okanye i-solitaire ngesi-French) ngumdlalo wekhadi lomntu omnye. Ukuguqulelwa kwesiFrentshi kubonisa kakuhle ukuba imalunga nantoni. Ukuguqulelwa, kuthetha "umonde". Iindidi ezahlukeneyo zeekhonksi zingasetyenziselwa ukudlala i-solitaire, zombini Isipanish mallet njengaye hayibo.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo Isolitaire esivumela ukuba sibe neengcebiso ezininzi zokuzonwabisa.
Esinye sezizathu eziphambili zempumelelo yaso sisekwe kwinto yokudlala umntu omnye ngaphandle kwembangi. Ukwenza umdlalo ogqibeleleyo wokuphumla nokucamngca.
Ibali leSolitaire 🤓
Isizungu ngu igama leentlobo ezahlukeneyo zemidlalo yamakhadi. Owona mdlalo waziwayo phakathi kwabo waziwa njengo "Isolitaire yakudalaImvelaphi ngqo yomdlalo ayaziwa, kodwa ulungiselelo lwamakhadi luvela kumakhadi e-tarot awayesetyenziselwa ukuvumisa. Ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX, umdlalo wakhankanywa okokuqala eMantla Yurophu, kwaye umdlalo uthathe IFransi ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX.
UNapoleon Bonaparte kuthiwa wayedlala i-solitaire rhoqo ngexesha lokuthinjwa kwakhe e-Saint Helena ngo-1816. Kwiminyaka elandelayo, umdlalo waba yinto ethandwayo eFrance kwaye ekugqibeleni woyisa umhlaba wonke, kubandakanya neJamani. Amagama amaninzi odwa (umzekelo, "ibhokisi") avela kuFrentshi.
Nanamhlanje, lo mdlalo udumileyo usathandwa ngabantu abaninzi. Yonke into oyifunayo inye umgangatho wamakhadi, indawo ethe tye, kunye neminye imithetho elula. Ke ngoko wonke umntu angadlala lo mdlalo.
Isizungu yi- uhlobo olulula lokuzonwabisa ukusukela kwixesha apho abantu babesenalo ixesha kwaye umhlaba wawungekakhawulezi kangako. Ayinamsebenzi ukuba uyayidlala ngendlela yakudala (ngesandla) okanye kwikhompyuter yamva nje- iyayiphumlisa kwaye iyiqeqeshe ingqondo yakho kwaye ithandwa kakhulu namhlanje kunakuqala!
Imbali yemidlalo ye-solitaire kwikhompyuter
Emva kokuba iPC yokuqala ifumaneke kwintengiso, yayilinyathelo nje elinengqiqo lokudlala ingxelo yedijithali kuyo. Kuba ukudlala amakhadi kwiscreen kufuna ngokuthe kratya amandla amancinci ekhompyuter, Inani elikhulu lemidlalo lavela ngexesha elifutshane. Ngemihla ye-MS-DOS, uninzi lwemidlalo yayisekwe kwisicatshulwa kwaye yayijolise kumdlali omnye kuphela.
Nangona kunjalo, iikhompyuter ziye zakhawuleza zaza zala maxesha, oko ke kwaphucula amathuba emidlalo. Ukwanda komthamo wememori kukwavumela iinkqubo ukuba zilingane kwimidlalo emininzi kwinkqubo enye. Yiyo yonke le ndlela ingqokelela yemidlalo yesolitaire yenziwe.
Ingqokelela yokuqala yorhwebo "Solitaire royaleYabhalwa nguBrad Fregger kwaye yakhutshwa yi-Spectrum Holobyte ngo-1987. Umdlalo wawulungele iiPC zombini (i-MS-DOS) kunye neMacintosh.
Kwiminyaka embalwa kamva, ngo-1992, iQQP (Ukuveliswa kweMigangatho yexabiso) wasungula ingqokelela enkulu ebizwa ngokuba yi "Uhambo lukaSolitaireLo mdlalo ukhutshelwe i-MS-DOS kwaye iqulethe inani eli-dizzying le-105 yemidlalo eyahlukeneyo, kunye neenkcukacha-manani zomdlalo ngamnye! Abadlali banokukhetha imidlalo ethile kwaye bangacwangcisi iihambo zabo kuphela, kodwa ukuthatha inxaxheba kwimishini (imibuzo) kunye nokufumana amanqaku ongezelelweyo emva kokuphumelela imijikelo embalwa
IMicrosoft yeWindows Solitaire Iqala ukuvela kwiWindows 3.0 ngo-1990. Ngo-1995, iiWindows 95 zakhupha umdlalo weFreecell. I-Freecell yathandwa kakhulu ngexeshana elifutshane, kwaye inani elikhulu leenguqulelo zezinye i-shareware zomdlalo zavela. Ekugqibeleni, ISolitaire ivele ecaleni kweMicrosoft XP Spider, Kulandelwa ukunkqonkqozwa okutsha kunye neenguqulelo eziphuculweyo.
Namhlanje, imidlalo iyafumaneka kuwo onke amaqonga onokucinga ngawo, kubandakanya iipilisi kunye nee-smartphones. Nokuba uphi na, kuhlala kukho into eyahlukileyo yesolitaire efumanekayo yokuphumla kunye nolonwabo!
Idlalwa njani i-solitaire: Iingcebiso ♥ ️ ♠ ️ ♣ ️
Ingcebiso 1: Kuqala sebenza ngamakhadi esolitaire angezantsi
Solo, kuya kufuneka usebenzise la makhadi alandelayo, kuba ezi zinto zifunekayo kufuneka zikhutshwe kuqala.
Jonga ukuba ungabeka la makhadi alandelayo ngaphezulu kwelinye. Ukuba ungahambisa amakhadi amaninzi ngaxeshanye, kuya kufuneka usebenzise imfumba enamakhadi ambalwa njengesikhokelo.. Ngale ndlela ufumana isihlalo esikhawulezayo esingenanto ngaphantsi.
Emva koko unokugcwalisa ngokukhawuleza izithuba ezingenanto kwakhona. Tyhila kuphela isitaki esiphezulu xa ungakwazi ukwenza enye intshukumo ngaphantsi.
Icebiso 2: i-ace nganye kufuneka inyuse kwangoko
Khumbula ukuhambisa ii-aces kwangoko.
Oku kuyinyani ngokukodwa kwii-aces ezikwezinye zeemfumba ezisezantsi. Uyabatyhala ngesandla sakho kwenye yeendawo ezikhululekileyo. Ngenye indlela, cofa kabini i-ace.
Kuya kufuneka ususe ii-aces kwimfumba ephezulu kwangoko. Ke ngoko, unokuba nethuba lokuhambisa amanye amakhadi kwenye yeemfumba ezisezantsi.
Ingcebiso 3: beka uLone King kwindawo yasimahla
Sebenza iibhetri ngokusemandleni akho. Ufuna imvume yookumkani.
Ngokukhawuleza xa ndinendawo yasimahla, kufuneka uyizalise ngokumkani. Emva koko beka onke amanye amakhadi ngokulandelelana. Ngale ndlela unokubeka phantsi oonobumba kamva.
Ukuba unokukhetha phakathi kookumkani ababini, kuya kufuneka unike ingqalelo umbala onokubeka kuwo uninzi lwamakhadi.
Kukwasebenza kwanjalo kwiindawo ezimbini zasimahla. Ngokufanelekileyo gcwalisa oku ngukumkani omnyama kwaye kanye ngobukumkani obomvu. Oku kwandisa ukubanakho kokudlala amakhadi amaninzi ngaxeshanye.
Ingcebiso 4: tshintsha amakhadi
Ukuba awusenako ukwenza intshukumo okanye ukuba akukho nto ibonakala inengqiqo kuwe, kuya kufuneka utshintshe.
Jonga amakhadi kwaye utshintshe phakathi kwawo ukuze ubeke amanye amakhadi ngaphezulu.
Utshintsho lubalulekile kwaye kuhlala kuphela kwendlela yokuphumelela umdlalo.
Ukuba awusaboni ezinye oololiwe, cofa kwinto leyo "Ingcebiso"kwimenyu. Ngeminye imidlalo ungacinezela u" T "kwibhodi yezitshixo kwaye umdlalo uza kukubonisa ukuba yeyiphi intshukumo enokwenzeka.
Iindidi zeSolitaire 🃏
Kukho iintlobo ezininzi ze solitaire, ezifuna ngaphezu komgangatho omnye kunye namanqanaba ezakhono ahlukeneyo kumdlali. Uluhlu olungezantsi luquka iintlobo ezahlukeneyo ze-solitaire, ukusuka kwiklasikhi yeklasikhi kunye nesigcawu ukuya kwimidlalo efuna isantya okanye, kumantombazana, umdlalo apho kuya kufuneka ubuze amakhadi kwaye unxibe imodeli nganye.
Iklasikhi yeklasikhi! Cwangcisa amakhadi kwi-Ace kuKumkani, uwahlule ngokwe-suit. Ukwenza oku, hlula amakhadi kwiikholamu ngokunyuka okunyukayo, uhlala utshintshana phakathi kwamakhadi abomvu namnyama, de kube kuboniswe indawo yonke. Xa ufumana i-ace, isasaze phezulu kwesikrini uze ubeke amanye amakhadi esuti efanayo kuyo.
Yahluke kancinane kuleya yangaphambili, Kule solitaire kufuneka uququzelele amakhadi ukusuka kuKumkani ukuya kwiAce. Kwakhona unesuti enye etafileni, nangona kunjalo amakhadi aya kuphindwa amatyeli amaninzi, ekuvumela ukuba wenze ngokulandelelana okungaphezulu kwesinye.
Injongo yalo mdlalos susa yonke ipiramidi yamakhadi, uwafanise ngababini adibanisa ukuya kwishumi elinantathu ukuwasusa kwiscreen. Ukongeza kumakhadi abekwe kwipiramidi, unamakhadi amathathu ongezelelweyo ekufuneka esetyenziselwe ukuphelisa amanye kunye nokukhulula amakhadi asezantsi, kunye nesithuba esongezelelweyo ukwahlula elinye lamakhadi.
Indlela inokuguqulelwa ngokuthi "indlela" kwaye isishwankathela injongo kunye noomatshini balo mdlalo kakuhle. Kuya kufuneka wenze iindlela zamakhadi, uzijoyine ngokwenani lobuso nganye, ekunyukeni nasekuhleni. Ikhadi ngalinye linokunxulunyaniswa kuphela nelokuqala okanye ikhadi langaphambili okanye kwenye yeqhula.
Apha Amakhadi kufuneka uwafake ngababini adibanisa ukuya kwishumi elinesithathu, nje ngePyramid Solitaire. Xa ususa amakhadi ngaphezulu kwemfumba, okulandelayo kuya kugqitywa, kuvulwe amathuba amatsha okudibanisa kunye namakhadi amane ophetheyo.
Isantya yile nto ibalulekileyo, ubuncinci kulo mdlalo. Ngokuchasene nekhompyuter, kufuneka ukhawuleze kwaye ususe onke amakhadi kwimfumba yakho. Ukwenza oku, beka amakhadi akho kwelinye lala mabini embindini wesikrini, ngokwenani lekhadi elisezantsi, kufanele ukuba libe linani elinye eliphakamileyo okanye elisezantsi kunekhadi elisetafileni.
IMagic Towers Solitaire
Omnye umdlalo ojongana nokususwa kwamakhadi ngokwenani ngalinye. Umahluko kukuba kufuneka ususe amakhadi ukukhulula inqaba kwiinqaba ezintathu ezantsi, uhlala ujonga ixabiso lekhadi eliqaqanjisiweyo ezantsi kwesikrini.
Umonde kunye nefashoni kunye, kumdlalo omnandi kakhulu. Kuya kufuneka ususe onke amakhadi akwisikrini ngaxeshanye onxiba nganye kwiimodeli. Ukuqokelela amakhadi asezantsi, beka amakhadi aneentlobo ezifanayo, ukongeza ekuthatheni ingqalelo: ezinye zeemodeli zinokukhetha imibala, iiprinta kunye nezitayile.
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona inomdla kuzo zonke. Kuya kufuneka ususe amakhadi kwiscreen ngokudibanisa Mahjong kunye nomdlalo wokukhumbula: zibeke ngababini ukujika amakhadi asezantsi, ukuvula amakhadi anesitshixo, khangela amakhadi anesitshixo esitsaliwe.